Semalt dia manolo-kevitra 3 mora tohina mba hanodinana ny votoatin-tranonkala
Raha te hisintona ny angon-drakitra avy amin'ny tranonkala samihafa, bilaogy, tokony hianatra fiteny fandaharana sasany tahaka ny C ++ sy Python ianao. Vao haingana dia nahita tranga maro samihafa ny votoatin'ny habaka amin'ny Internet isika, ary ny ankamaroan'ireny tranga ireny dia nahitana fitaovana sy fitaovana maoderina . Ho an'ireo mpampiasa Windows sy Linux dia maro ireo rindrankajy fitaovana enti-manamboatra ny tranonkala izay miezaka manamaivana ny asany. Ny olona sasany, ohatra, dia manintona ny votoatin-tsakafo manonta, saingy fotoana fohy ihany izany.
Eto izahay dia niresaka momba ny dingana 3 tsotra mba hamehezana ny votoatin'ny tranokala anatin'ny latsaky ny 60 segondra.
Ny mpampiasa ratsy rehetra dia tokony atao:
1. Afaka miditra amin'ny fitaovana an-tserasera:
Azonao atao ny manandrana fandaharana malaza amin'ny aterineto toy ny Extracty, Import. io, ary Portia avy amin'ny Scrapinghub. Import. io dia nilaza fa hanakona pejy maherin'ny 4 tapitrisa ao amin'ny Internet. Afaka manome angona azo antoka sy manan-danja ary mahasoa amin'ny orinasa rehetra, manomboka amin'ny fanombohana mankany amin'ny orinasa lehibe sy marika malaza. Ankoatra izany, ity fitaovana ity dia tena tsara ho an'ny mpampianatra tsy miankina, fikambanana mpanao asa soa, mpanao gazety ary mpandrindra. Import. Ity dia fantatra amin'ny fandefasana ny vokatra SaaS izay ahafahantsika manova ny votoatin'ny tranokala ho fampahalalana mora vakiana sy azo antoka. Ny teknolojia fianarana milina dia mametraka. io ny safidy teo aloha teo amin'ny coders sy ny tsy codec.
Etsy andaniny, Extracty dia manova ny votoatin'ny tranonkala ho toy ny angon-drakitra mahasoa tsy mila code. Manampy anao handamina URL an'arivony amin'ny fotoana iray na amin'ny fandaharam-potoana izany. Azonao atao ny mahazo alalana an-jatony amin'ny rakitra maromaro an'arivony mampiasa Extract. Ity fandaharan'asan'ny tranonkala ity dia mahatonga ny asanao ho mora kokoa sy haingana ary mihazakazaka tanteraka amin'ny rafitra rahona.
Portia avy amin'ny Scrapinghub dia fitaovana maoderina iray hafa mahavariana izay mahatonga ny asanao ho mora ary mamoaka ny angona ao amin'ny endrika tianao. Portia dia mamela antsika hanangona vaovao avy amin'ny vohikala samihafa ary tsy mila fahalalana fahalalana. Azonao atao ny mamorona ny môdely amin'ny fipihana eo amin'ireo singa na pejy tianao handrafetana, ary ny Portia dia hamorona ny spider izay tsy hanaisotra fotsiny ny angon-drakitrao fa koa hikapoka ny votoatin'ny tranonkala.
2. Ampidiro ny adiresin'ny mpifaninana:
Raha vantany vao nisafidy tolotra tranonkala iray tianao ianao, ny dingana manaraka dia ny miditra ny URL an'ny mpifaninana aminao ary manomboka ny ratrao. Ny sasany amin'ireo fitaovana ireo dia hikapoka ny tranokala manontolo ao anatin'ny segondra vitsy, raha toa kosa ka ny sasany dia mamoaka votoaty ho anao.
3. Fandefasana ny angon-drakitra nosafidianao:
Raha vao mahazo ny angona angatahina ianao, ny dingana farany dia ny manondrana ny angon-drakitrao. Misy fomba sasany azonao itondrana ny angon-drakitra. Ny tranonkala dia mamorona fampahalalana amin'ny endrika latabatra, lisitra ary lamina, izay mahatonga azy ireo ho mora ampiasaina na handefa ireo rakitra tianao. Ny roa tena format manan-danja indrindra dia CSV sy JSON. Ny ankamaroan'ny serivisiana rehetra dia manohana ireo endrika ireo. Azontsika atao ny mihazakazaka ny fitoeran-tsinay ary mitahiry ny angon-drakitra amin'ny alàlan'ny fametrahana ny anaran-tsoratra ary mifidy ny endrika faniriana. Azontsika atao koa ny mampiasa ny safidy Item Pipeline amin'ny import. io, Extracty sy Portia hametraka ny vokatra ao amin'ny pipeline ary mahazo tahiry CSV sy JSON raha toa ka vita ny fanasarahana Source .